Guurka Khasabka ah - iftineducation.com ≡Navigasi Menu
→ Guurka Khasabka ah
iftineducation.com - Guur wuxuu dhicikaraa kaliya hadii ey jirto madaxbanaani iyo ka raali noqosho buuxda
- la hadal dad
Ma,jiri qof inuu guursado lagu qasbaayo. Taas waxey ku cadahay xuquuqda baniaadanka iyo sharciga noorweey.Bulshooyin baddan ayaa waxey hiddo u leeyihiin guurka labada qof leysa siiyo, meeshaas lagu xaqiijinayo in caruurta ey helaan guur fiican ahna masuuliyad waalidka saran. Guurka ah labo qof oo leysa siiyay waa laga ogolyahay waddanka Noorweey, hadii uu yahay mid u dhaca si madaxbanaan oo ey tahay waxey rabaan labada qof ee is guursanaya.
shegeyso in guur uu ku dhaco si madaxbanaan oo raali lagayahay. Macnaheedu wa in kuwa isguursanaya ey iskood isku raacaan Sharciga Noorweey waxaa ku qoran in guur uu dhicikaro markuu ka yimaado kuwa is guursanaya, iyo iney dumarka iyo ragaba ey xaqa u wadda simanyihiin markey timaado doorashada lamaanaha kale. Kuwa is guursanaya waa iney da,adooda ka sareysaa 18 jir. Dadka wadda dhadiga ah iyo kuwa wadda labka ah wey is guursankaraan. Ku cadaadin ama ku qasbid qof inuu guursado waa mamnuuc ciqaab muddan waddanka Noorweey. Taas waxey quseysaa xitaa haduu guurka ka dhaco waddanka dibadiisa oo aadna dagantahay Noorwey. Guur ku dhacay cadaadis iyo qasab waxaa laga soo qaadikaraa midaan la aqoonsan. Marka guurka laga soo qaadayo midaan la aqoonsan waxaa qofka loo diwaangalinayaa in uusan guursan, ee loo diwaangalinmaayo in la kalatagay. Qaramada midoobay waxey ku dhawaaqday in xuquuqda baniaadanka ey noo
Laanqeyrtacas teleefankeeda ee guurka qasabka ah iyo gudniinka fircooniga ahLaanqeyrtacas teleefankeeda waa mid warbixin oo loogu talagalay waddankoo dhan, halkaas oo ey ku waaninayaan dad aqoon u leh mawduucan, waxeyna kaa caawinayaan sidaad ola xiriirilaheyd goobaha dowlada ee dadka caawiya.Wac teleefanka 815 55 201 (isniinta ilaa jimcaha, saacada 09.00 ilaa 17.00), iimeylka: info.tvangsekteskap@redcross.no.
Hadii aad ku sugantahay waddanka dibadiisa waxaad caawin ka helikartaa safaarada. Shabakada www.norway.info waxaad ka heleysaa ciwaanka, teleefanka iyo iimeylka safaarada ama qunsulka kuu dhaw. Waxaad la xiriirikartaa safaaradkasta eek u taal waddanka dibadiisa teleefoonka+ 47 23 95 13 00. Waxey kuu gubinaayaan safaarada kuugu dhaw.